Mgba ọkụ Volumetric: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ maka na ụdị | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị nọ n’ime ụlọ nyocha, anyị na-eji ụfọdụ ngwa ọrụ enyere anyị aka ime nha na nyocha. Otu n'ime akụrụngwa akụrụngwa kachasị bụrụ ihe rụzuru na ụwa onwu na physics bụ karama volumetric. Ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ maka ọganiihu na nchọpụta ọtụtụ mmụta sayensị. N'ihi na ọ na - enyere aka ịkọwapụta oke mmiri mmiri enwere ike ịlele, ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ a kacha eji eme ihe.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, mkpa na otu esi eji flask volumetric.
1 Kedu ihe bụ flask vols
2 Gịnị ka ọ bụ maka
3 Ojiji nke ikpu volumetric
4 Fladị mpempe akwụkwọ volumetric
Kedu ihe bụ flask vols
A makwaara ya site na aha Fiola na ọ bụ ihe ọzọ karịa iko iko eji na laboratories. Ekele maka ngwá ọrụ a, enwere ike ịnweta nha nke ọkwa mmiri mmiri ma jiri ya gwakọta ihe ndị aga - eji mee ihe ma emechaa. Kacha nkịtị ihe bụ na ọ bụ nke enyo na nwere elongated na warara olu. Ala ya dị larịị kpam kpam. N'olu ya nwere akara a maara dị ka gaug, ya mere aha ya. Ikike ahụ na-ahụ maka igosi olu mmiri mmiri nke iko volumetric ga-ebu iji kwe nkwa ma kwado nha ziri ezi. N'ụzọ dị otú a, a na-enweta nha yiri nke a na oke njehie pere mpe.
Akara olu na-amalite site na ntọala ube ahụ ma na-agafe n'olu dị warara. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ịnye ụdị nha olu dị iche iche.
A na-eji ite volumetric eme ihe n'ụzọ ziri ezi iji tụọ ọtụtụ mmiri mmiri nwere ike ịchọta na ụlọ nyocha. Enwere ike iji ha mee ụfọdụ ngwakọta nke ihe dị iche iche ma nweta ihe mejupụtara na-ebuteghị ọrụ ya. Buru n’uche nke ahụ ọtụtụ flaks na-adabara naanị na laboratlọ akwụkwọ. Iberibe ọkụ ndị a nwere ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ ma nwekwuo nlezianya. Agbanyeghị, na ụlọ nyocha gọọmentị enwere ụdị ndị ọzọ akọwapụtara nke ọma nwere akara dị iche iche ma kwado ikike dị ukwuu.
Ihe kachasị mkpa tupu ịzụta akwa volumetric bụ ịmara ihe ọ ga-eji. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhọrọ ụdị kachasị adaba dabere na ojiji a ga-enye ya. Ọrụ ahụ dị mfe. Ọ bụ naanị ihe dị mkpa ịmara ụdị akara achọrọ iji nweta mmesiri ziri ezi. Ihe a nwere ike ịbụ olu mmiri ma ọ bụ ngwakọta ha. Isi ọrụ nke ite ọkụ volumetric bụ iji tụọ olu nke mmiri mmiri nke ụlọ nyocha ọ bụla na-eji. Enwere ike iji ya maka ụdị ule ma ọ bụ nnwale ọ bụla.
Nzọụkwụ kachasị mkpa ịmara mgbe ị na-eji ite volumetric eme ihe bụ iji mezuo akara ahụ. Ime bụ iji mejupụta flask volumet na ụzọ ziri ezi. Iji mee nke a, ọ kachasị mma iji foneelu n'ihi na ọ nwere oke ndị ọzọ nyefere. N'ịbụ onye dị elu na nke elongated, ọ dị mfe itinye mmiri ahụ n'ime ite nwere olu. Site na nke a, anyị ga-enweta nkenke ka mma ebe ọ bụ na anyị anaghị enwe ihe egwu nke ịwụfu. Ọ ga-enyekwara anyị aka ịnwale ihe ziri ezi karị na nkasi obi ka ukwuu na usoro ahụ.
Isi ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche mgbe anyị na-eji ite nwere olu bụ oge anyị ga-emerịrị ihe ahụ. Ikwesiri ilekwasị anya na isi ihe dị n'etiti nke usoro ahụ na-enweta ihe ngwọta ahụ. Anyị ga-eburu n'uche na ọtụtụ flasks nwere oke dị elu na ndị ọzọ nwere obere ọnụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa bụ na anyị ga na-elekwasị anya mgbe niile na ikike. Nke a bụ naanị ụzọ iji nwee ike ijikwa nke ọma etiti etiti nke usoro ihe ngwọta. Anyị ga-eleba anya na ikike dị ka akara kwụ ọtọ iji kwenye na ngụkọta nke mmiri mmiri ahụ. Enweghị ike ịhụ ya dị ka ellipse ma ọ bụ na anyị agaghị enwe nsonaazụ anyị tụrụ anya ya.
Ojiji nke ikpu volumetric
Ọ bụghị naanị iji tụọ olu nke mmiri mmiri, kamakwa iji mepụta ngwakọta dị iche iche. Anyị ga-ekewa dị iche iche ojiji nke volumetric flask:
Hụ oke mmiri mmiri: Rịba ama akara n'olu nke ite dị ka ihe nduzi. Ekele ha, anyị nwere ike ịlele olu nke mmiri mmiri site na ịlele usoro ụzọ ma ọ bụ elu ma ọ bụ ala.
Kwadebe ihe ngwọta: Nke a na ụdị karama na-eje ozi iji kwadebe ihe ngwọta. Ọ bụrụ na anyị maara ego nke ihe mgbaze na ihe mgbaze, anyị nwere ike ịgwakọta ego ole anyị chọrọ. A na-ekpebi ịdị arọ nke solute ahụ site na nguzozi. Mgbe ahụ, a na-etinye ihe nkwụsị na ite volumetric ma maa jijiji ruo mgbe agwakọtara ihe niile ahụ na-enweghị ihe ize ndụ nke ịwụfu mmiri.
Fladị mpempe akwụkwọ volumetric
E nwere ụdị mpempe akwụkwọ nke volumetric dị ka ụfọdụ njirimara. Ka anyị nyochaa ihe ha bụ:
Dị ka nkenke: Anyị nwere mpempe akwụkwọ volumetric nke ụdị A na-eji atụ mmiri ma na-akwadebe ngwakọta dị iche iche. A na-eji ha n'ime ụlọ nyocha kemịkal dị elu. Umdị B nke Volumetric flakss bụ ndị a na-ahụ n’ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na-achọkarị ihe.
Dị ka olu olu: N'ihe banyere ikike nke olu mpempe akwụkwọ, anyị anaghị ezo aka na 1 na 2 ml flasks, ọ bụ ezie na a na-ejikarị ndị sitere na 25 ml ruo 500 ml eme ihe.
Dị ka agba: dabere na ihe ihe a mere mere ị nwere ike ịchọta agba dị iche iche. Havefọdụ nwere agba dị mkpa iji nwee ike ịhazi ngwakọta ndị metụtara ọkụ. Buru n'uche na ha ga-enwe ezigbo ọcha maka ụdị ọ bụla. Ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo ọcha, enwere ike imetụta ma gbanwee nha.
Dịka ị pụrụ ịhụ, karama volumetric bụ otu n'ime ngwaọrụ a na-ejikarị eme ihe n'ụwa nke kemistri na physics na laboratories. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke ọkụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Okpokoro Volumetric